Kaadị mgbake VS Wondershare Data Recovery
Kaadị Iweghachite bụ foto mgbake ngwá ọrụ maka SD kaadị ji ma a ekwentị ma ọ bụ igwefoto. Ọ ga-eji iji weghachite foto na video furu efu, formatted, ehichapụ na-emerụ kaadị ebe nchekwa. Ọ na-akwado kasị nke ebe nchekwa kaadị gụnyere na-ejedebeghị na SDHC, kọmpat Flash, SD kaadị, ebe nchekwa Stick na xd foto kaadị. Kaadị Iweghachite utilizes Ọkachamara mode-eduzi gị mfe nzọụkwụ naghachi gị data. Ngwá ọrụ a bụ weghachiri azụ foto gị na vidiyo na mbụ ha ụdị enweghị altering.
Wodershare Data Iweghachite bụ ngwá ọrụ dị ike na-eji maka na-agbake furu efu data. Nke a online ngwá ọrụ ike ga-eji na-agbake fọrọ nke nta niile faịlụ na ụdị gụnyere video, MP3 music, foto, ozi, email, ochie, na akwụkwọ. Ma ị furu efu faịlụ site ihichapụ egweri biini, kaadị ebe nchekwa, Flash efere, igwefoto dijitalụ ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga ngwaọrụ Wondershare nwere ike ka na-esi na azụ. Nke a software nwere ike naghachi faịlụ n'agbanyeghị otú data ọnwụ mere. A na-agụnye formatting, ilezi anya na elezighị Ihichapụ, rụrụ arụ na kaadị ebe nchekwa na-ezighị ezi njikwa nke ngwaọrụ dị ka ịkwụnye si na mgbe ọ ka dị ojiji na ike isi iyi ọdịda.
Wondershare Data Recovery Vesos Kaadị Iweghachite
Mgbake ngwá ọrụ
Kaadị Iweghachite Software
-Enye ohere maka atụ nke photos tupu mgbake
rụrụ na-agụ naanị ọrụ
User adịghị achọ nkà na-eji software.
Recovers video, audio, foto furu efu
N'agbanyeghị ihe kpatara nke data ọnwụ.
Rụrụ na-agụ naanị arụmọrụ na kaadị ebe nchekwa
The software akwado ebe nchekwa kaadị na dị iche iche nchekwa ike
Recovers furu efu faịlụ site na MMC
Data ọnwụ ruru formatting nke kaadị ebe nchekwa
elezighị ma ọ bụ kpachaara anya nhichapụ nke faịlụ
emerụ kaadị ebe nchekwa ruru ka kpọtụrụ na nje kọmputa
Loss nke faịlụ mgbe partitioning ma ọ bụ nkebi
njehie-atụghị Anya ike isi iyi ọnwụ na-eme ka ọnwụ nke faịlụ
Loss nke data ruru wepụrụ kaadị ebe nchekwa mgbe na ojiji
Emerụ kaadị ebe nchekwa
Photos ọnwụ ahụ dị ka a n'ihi nke hichapụ ihe niile ma ọ bụ formatting
Mebiri data mere site ịgbanyụ igwefoto mgbe na ojiji
Loss nke foto ruru iji dị iche iche ese foto ma ọ bụ ngwaọrụ
emerụ data mere site mmebi oké egwu ebe dị ka mgbọrọgwụ, buut ma ọ bụ abụba.
Archives (rar, ZIP, Nọdụ ala ...)
Documents (HTML, EPS, DOC, PDF, CWK, INDD ...)
Ozi na Email (DBX, PST, EMLX ...)
Foto (TIF, jpg, JPEG ...)
Egweri biini (laptọọpụ, PC, Handy, Mac ...)
Flash draịva (-awụlikwa elu draịva, mkpịsị aka draịva, USB draịva, Pen draịva ...)
Ebe nchekwa kaadị (xd, Multimedia kaadị, kọmpat Flash, SDHC, SD, Micro SD, SmartMedia ...)
Digital igwefoto ma ọ bụ camcorder (Sony, Kodak, Canon, Nikon, JVC ...)
Mbughari draịva (Apple, WD, Toshiba, Samsung, Seagate ...)
Ike draịva (Dell, Toshiba,
Ese foto (Olympus, Canon, Fujifilm, Kodak, Panasonic, Nikon ...)
Ekwentị ụdị (Blackberry, Android, Samsung ...)
Flash ebe nchekwa kaadị (Lexar, PNY, Panasonic, Kingston, Sandisk, transcend, FujiFilm ...)
Ahịa Nwere a Free 100MB mgbake ikpe
ma ọ bụ zụta ya na $24.95 Get a free ikpe
ma ọ bụ zụta ya na $39.95
Olee otú naghachi data site na kaadị ebe nchekwa na iji Wondershare Data Recovery
Naghachi gị furu efu data si na kaadị ebe nchekwa, i kwesịrị data mgbake software. Wondershare Data Recovery Bụ ihe kasị mma data mgbake ngwá ọrụ nke ga-enyere gị aka weghachite ị kwụsịrị faịlụ n'agbanyeghị otú data ọnwụ mere. Download software, wụnye na-agba ya na kọmputa gị. Adịghị wụnye software ebe na kaadị ebe nchekwa ma na a mma nchekwa na ngwaọrụ. Ebe a na-mfe nzọụkwụ na-eso na-agbake gị data si kaadị ebe nchekwa.
Step1 Jikọọ na kaadị ebe nchekwa
Jikọọ na kaadị ebe nchekwa na PC iji ma a kaadị agụ ma ọ bụ USB mbanye. Gbaa mbọ hụ na kaadị na-ọma ejikọrọ. Ẹkedori mgbake omume na pịa Malite na-amalite mgbake nke gị furu efu data.
Step2 Họrọ na kaadị ebe nchekwa na ike iṅomi
Ọ bụrụ na ndị PC ghotara kaadị, ị ga-ahụ ya egosi n'etiti ndepụta nke draịva na gị na ihuenyo. Họrọ kaadị ebe nchekwa na iti na iṅomi button nri gị ala n'aka nri. Nke a na usoro ga-agbake niile furu efu faịlụ ma site nhichapụ, formatting ma ọ bụ merụọ kaadị.
Ị nwere ike ịhọrọ iyo faịlụ iche ka-natara site na iji iyo Option. Nke a na nhọrọ bụ ngwa na mfe iji.
Nzọụkwụ 3 Naghachi gị faịlụ
Mgbe scanning bụ site, na-aga site natara faịlụ egosipụta site scanning results. Họrọ faịlụ na ị chọrọ usoro ihe omume iji weghachi na iti on Naghachi bọtịnụ.
Mgbe i natara ị faịlụ site na kaadị ebe nchekwa, na-azọpụta ha dị iche nchekwa media kama karịa mbụ na kaadị ebe nchekwa
M na-ahọrọ Wondershare Data Recovery ka Kaadị Iweghachite. N'ihi gịnị?
Mbụ, Wondershare Data Recovery bụ ka ọma elu atụmatụ nyere eziokwu na ọ nwere ike naputa faịlụ site na kasị faịlụ ụdị ma ọ bụ formats n'agbanyeghị nke na-akpata data ọnwụ.
Nke a na usoro nwere ike iji na ọ bụghị nanị na-agbake photos kamakwa audios, videos, ụlọ ọrụ akwụkwọ, ochie, ozi, na ozi ịntanetị. The ala akara bụ omume a bụ ihe mepere emepe karịa Kaadị Iweghachite software.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Kaadị mgbake VS Wondershare Data Recovery, ihe bụ ọkacha mmasị gị?